Posted by ညီနေမင်း on 7:29 PM with3comments
ကျွန်တော်တို့ logo icon နှင့် မိမိ website လိပ်စာရဲ့ ရှေ့မှာ ထည့်ဖို့အတွက် animation(.gif) ပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုးပုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖန်တီးယူဖို့အတွက် photoshop ဟာ ကောင်းမွန်တယ် ဆိုပေမယ့် အရမ်းသေးတဲ့ icon လေးတွေကို ဖန်တီးဖို့ အတွက်တော့ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ် . လုပ်ယူလို့လဲရပါတယ် . ကျွန်တော်ရေးပေးခဲ့ ပြီးသားပါ . ဒါပေမယ့် ဖိုင်ဆိုဒ်က လိုအပ်တာ ထက်ကြီးနေမယ် . ပြီးတော့ ပုံကအရမ်းကို ၀ါးနေလိမ့်မယ် . အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ iconworkshop နဲ့သာ ကိုင်လိုက် ပုံကသေးပေမယ့် ရှင်းပြီးတော့ မူလပုံစံ မပျက်ပဲ မူရင်းပုံ အတိုင်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် . icon လုပ်ချင်သူများ အတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ . အဆင်ပြေ နိုင်ကြပါစေဗျာ .
icon ဆိုတာ မိမိဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာရဲ့ ရှေ့မှာ ထည့်ဖို့ logo icon ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ အလံလေး လှုပ်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် . အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါ . နောက်တစ်ခုက program ရေးတဲ့သူတွေ program တစ်ခုရေးပြီးလို့ မိမိ program ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ icon လေးတွေကိုလဲ ဒီ IconWorkShop နဲ့ ဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ် . Download multiupload ၊ Download mediafire
www.myanetmin.comDecember 5, 2009 at 1:27 PMကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် နောက်ပြီး စေတနတွေကို တကယ်ပဲလေးစားတယ် ဆက်ပြီး အများအတွက် အကောင်းဆုံးတွေကို ရှာဖွေဖန်တီးပေး ပို့တင်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုပြုလိုက်ပါတယ်ဒို့နစ်က mrblake969@gmail.comReplyDeleteစိုးတင်အောင်December 5, 2009 at 8:09 PMညီလေး ခင်လဲခင်တယ်၊အားလဲနာတယ် iconworkshop လေးယူသွားပြီ။ အကိုလဲ mediafire ကမှ ဒေါင်းလို့ အဆင်ပြေတယ်။ ညီလေးစေတနာတွေ ညီလေးကို ပြန်အကျိုးပေးမှာပါ။ ညီလေး ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ReplyDeletePhyo MyanmarJanuary 19, 2010 at 12:54 PMအကို့ကို အရမ်းလေးစားတယ်ဗျာ ....ဒီ Site ကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့မိသွားတာပါ ...အတွေ့နောက်ကျလိုက်တာ အကိုရာ ...ခုဆို .. ကျွန်တော် ဒီဆိုဒ်ကောင်းကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ပါတယ် ... ပြီးတော့ ညွှန်းဖြစ်ပါတယ် ..ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Easy Disk Drive Safeguard version 2.0
SSC Service Latest versions (4.30)
Rapidshare Downloader 2.0 (latestversion)
virus မေးခွန်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်
Megaupload, Megashares, Netload, Hotfile, Easy-Sha...
အသဲပေါတဲ့သူအတွက် Heart brush လုပ်ကြည့်ရအောင်
photoshop brush တစ်ခုကို font ကနေ ဘယ်လိုဖန်တီးယူကြ...